Kubuda kutsva kunopa 16GB iPhone yaenda | IPhone nhau
Kubuda kutsva kunoratidza kuti 16GB iPhone yaenda
Vazhinji vevashandisi vanotenga 16GB modhi hazviite nekuti ndiyo nzvimbo yekuchengetera yavanoda, asi nekuti ndiyo inodhura mhando iyo kambani inoisa pakutengesa. Zviripachena, hapana munhu anoda kudzima mafoto uye mavhidhiyo kubva kune yavo kifaa kuti akwanise kutora mamwe mafoto uye mavhidhiyo, regerera iyo redundancy. Zvinoenderana nerunyerekupe rwazvino rwakaburitswa, iyo 16 GB iPhone inogona kuve nemazuva ayo akaverengerwa kubvira 'sekureva kwekudonha kwazvino kwakanangana nemamodheru matsva, ayo kambani yeCompertino-based ichauya mukati memavhiki mashoma, ivo vachatipa nzvimbo shoma ye32GB yekuchengetedza.
Zvinoenderana neruzivo rwasvika pamaoko eThe Malignant, iyo inotevera iPhone modhi yaizouya ne 32GB nzvimbo mune yayo yekutanga vhezheni. Asi ichi hachizove chiri chega chitsva mukuchengeterwa kwechigadzirwa chekambani, asi isu taizoonawo kuti Apple yaizofamba sei yakafanana neyazvino, kubvisa iyo 64 GB modhi uye nekuwedzera iyo inotevera modhi, iyo 128 GB imwe. Kune vashandisi vane yakakwira yekuchengetedza zvinodiwa, Apple inogona kupa 256GB modhi.
Zvinoenderana neruzivo rwawakaburitsa, kambani yeJapan Toshiba inogona kuve inogadzira iyo machipisi machira ayo kambani ichazoshandisa mune aya mamodheru matsva. Saka, Apple yaizopa zvakare yakaparadzaniswa nzvimbo dzekuchengetera zana euros / 100 madhora sezvazviri kuita parizvino. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti parizvino iyo Pro Pro iri kutove ichipa imwecheteyo yekuchengetedza masimba: 32, 128 uye 256 GB yekuchengetedza. Kunyangwe iyo 32 GB modhi iri yekuseka mune modhi iyo mune dzidziso yakanangana nevazhinji vashandisi ve pro, haina kumbotaurwa zvirinani, iyo iPad.
Izvo zviri pachena ndezvekuti kudzamara iwo matsva iPhone mamodheru aunzwa, hatisi kuzosiya kusahadzika Iwe unofungei nezve shanduko kubva mukuchengetedza kwe12, 64 uye 128 GB kune imwe ye32, 128 uye 256 GB?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Kubuda kutsva kunoratidza kuti 16GB iPhone yaenda
Iwe unotengesa chimwe chinhu chatinosimudza mutengo we32Gb?
Iyo yakanaka ingave 64GB sehwaro sezvo kamera yeazvino iPhones 6s iri 4k, uye yaizotevera 128GB uye 256GB. Kupa mutengi izvo zvavanokodzera pamitengo yakakwira yeiyo iPhone.
Ini ndinofunga Apple inofanira kutopa shanduko huru uye vape zvigadzirwa zvinoenderana nemutengo wavo uye kugadzirisa kwavo kupera sezvo chero modhi yagara iine dambudziko.
Sezvo paine vateveri vazhinji veichi chiratidzo, kusanganisira ini, isu takatomboodzwa moyo nezvigadzirwa zvakaburitswa nguva pfupi yadarika.
Ndinofunga vari kukanganwa vanotenga zvigadzirwa zvavo kubva.
MindNode yemahara kwenguva yakatarwa seapp yevhiki
Vhidhiyo nyowani inoratidza OverSky, jailbreak yeIOS 9.3.4